Shina · Desambra, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Desambra, 2019
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Desambra, 2019
Mitsikera ny fanararaotana ara-pitsarana ataon'ny Huawei amin'ireo mpiasany teo aloha ny mpiserasera Shinoa
Fahalalahàna miteny 27 Desambra 2019
Nosamborin'ny polisin'i Shenzhen i Li Hongyuan, mpiasan'ny Huawei teo aloha rehefa niampanga azy ho nanodikodim-bola ny Huawei. Nogadraina 251 andro izy.
Mpanazava: Ahoana no hahafahan'ny Lalàna Amerikana momba ny zon'olombelona sy ny demokrasia hiaro ny fahalalahana ao Hong Kong
Amerika Avaratra 25 Desambra 2019
Nandany lalàna iray mitsinjo ny fiarovana ny Sata fizakantena ananan'i Hong Kong sy ireo zo sivilin'ireo mponina ao aminy ny antenimieram-doholona ao Etazonia.
Mediam-bahoaka 24 Desambra 2019
Rehefa any Rôma, manaova toy ireo Rômanina [dikanteny kitoatoa an'ilay ohabolana]. Raha toa ka andeha hilalao eo amin'ny sehatry ny varotra ianao dia tsy maintsy manaraka ireo fitsipika. Raha toa ka te hilalao eo amin'ny tontolon'ny bilaogy aty Sina ny MS, tsy maintsy manaraka ny fitsipika izy, sa tsy izany?
“Mandoro boky sy mandevina mpampianatra ambony”: fandoroamboky miteraka fahatezerana ao amin'ny media sosialy shinoa
Fahalalahàna miteny 17 Desambra 2019
"Ahoana moa no iresahan'ny tanora ny fiantraikany ara-tontolo iainana fotsiny amin'ny fandoroana boky? Fa tsy mbola nahafantatra ny sariohatra ara-tantera navelan'ny “fandoroana boky sy fandevenana mpampianatra ambony” ve ry zareo?"
Tian'ireo shinoa manampahefana omena valisoa izay mpisera anaty aterineto ka manapariaka “vaovao tsara”
Fitantanam-pitondrana 13 Desambra 2019
Amporisihan'ny birao shinoa misahana ny aterineto ireo orinasa misehatra amin'ny teknolojia mba hanome valisoa ireo "manapariaka vaovao tsara". Tsy miombona amin'ny famaritan'ny governemanta ny atao hoe vaovao tsara ireo shinoa mpampiasa aterineto
Fahalalahàna miteny 03 Desambra 2019
Mampanazatra ireo vahiny mpanao gazety amin'ny "singam-piteny" i Beijing mba hahatonga azy ireo “hitovy fiteny" amin'ny famoahana shinoa.
Mediam-bahoaka 02 Desambra 2019
Olona 3 tapitrisa tonga nandatsa-bato, resin'i Hong Kong ny isa ambony indrindra tamin'ny fandraisana anjara hatrizay
Hong Kong (Shina) 01 Desambra 2019
Raisina ho tondro goavana maneho ny hevitr'ireo olompirenena manoloana ny krizy pôlitika misy amin'izao fotoana ny voka-pifidianana, satria an-tapitrisany ireo mpandatsa-bato misafidy amin'ireo mpifaninana mpomba ny andrimpanjakana sy ny mpandàla ny demaokrasia.